UKhune ujabule wafa ebuyiselwa esikhundleni sobukaputeni kwiChiefs
U-Itumeleng Khune uyena ozobe engukaputeni weKaizer Chiefs ngesizini ezoqala yeDStv Premiership. Lokhu kuqinisekiswe umqeqeshi waleli qembu laseNaturena, uStuart Baxter ngoLwesine.
UBaxter ubekhuluma ngomdlalo weCarling Black Label Cup abazowudlala ne-Orlando Pirates e-Orlando Stadium, ngeSonto ngo-5 ntambama.
“Ukaputeni weqembu uyena lo ohlezi eduze kwami,” usho kanje uBaxter ekhomba ngekhanda uKhune obehlezi eduze kwakhe. Lo mqeqeshi uyaziwa ukuthi uyakholelwa kuKhune futhi akazange azame nakancane ukukufihla lokho.
“UKhune usedlale kahle isikhathi eside empilweni yakhe yebhola. Ukuthi usuke edlala noma esebhentshini, noma elimele kodwa ekhona siziqeqesha, kusho lukhulu nje ukuba khona kwakhe eqenjini.
“Ungumdlali osezingeni eliphezulu futhi kuyajabulisa ukuba naye kwiKaizer Chiefs,” kusho uBaxter. Ukubuyela kukaKhune ekubeni ngukaputeni kusho ukuthi uzosithola njalo isikimu kunabanye onozinti abakhona kwiChiefs.
UKhune akayidlalanga imidlalo emini ngesizini edlule nokwenze ukuthi kudlale kakhulu uDaniel Akpeyi noBruce Bvuma. Lo nozinti uyisithandwa sabalandeli nokufakazelwa ukuthi uyena ohlale ehamba phambili ngamavoti uma kudlalwa iCarling Black Label Cup.
“Ngizizwa ngijabule ngokuzihola phambili ngamavoti kodwa lokho akusho ukuthi kumele ngizithwale. Kumele ngidlale ngokuzimisela ngiphinde ngibe yisibonelo kwabanye abadlali,” kusho uKhune.
“Ukuthola amavoti amaningi kusuke kungasho ukuthi usungcono kakhulu kunabanye abadlali.” UKhune usanda kuvuselela inkontileka yakhe ngeminyaka emibili kwiChiefs futhi uthe uyajabula kakuhlu ngokuthi uzoqhubeka nokudlala kuMakhosi.
“Ngiyabonga kakhulu ukuthi nginikwe elinye ithuba lokudlalela iChiefs. Okumele ngikwenze ukuthi ngibhukule ngoba sinonozinti abahle kakhulu kwiChiefs. Ukuncintisana kwethu njengonozinti kuzosiza iqembu,” kusho lo nozinti.
Uvumile ukuthi bekumkhathaza ukungadlali njalo ngesizini edlule ngenxa yezizathu ezehlukene. “Abaqeqeshi banamaqhinga ahlukene, ngakho uma ngingangeni eqhingeni lomqeqeshi akukho engingakwenza ngaphandle kokuzama ukuliqonda lelo qhinga.
“Ngesizini edlule bengihlushwa ukulimala kakhulu. Bengithi ngisathi sengiluleme ngiphinde ngilimale futhi. Kuzomele ngibuyele emuva ngibheke ukuthi yini le ebengiyenza kahle ukuze ngigweme ukulimala,” kuphetha uKhune.
FUNDA NALA: UJomo ufuna lisetshenziswe ishumi kwiPirates, uthi akanankinga yena
Kuzokhumbuleka ukuthi ngesizini edlule uGavin Hunt wenze uRamahlwe Mphahlele ukaputeni, futhi ubelokhu ekugcizelela ukuthi uyena ukaputeni weChiefs uma ekhuluma nabezindaba. Nokho sekuzophela isizini ibhande beligqokwa uBernard Parker.
UBaxter uveze ukuthi baningi abadlali abazobe bengekho emdlalweni womkhaya ngenxa yokulimala. Ubale uLebo Manyama, Leonardo Castro, Dumisane Zuma, Khama Billiat (onomkhuhlane) noSamir Nurkovic (okungabazekayo ukuthi uzodlala yini ngenxa yedolo).
Previous Previous post: UJomo akanamona ngeshumi lePirates, useshiyele kuKhoza ukunquma
Next Next post: Ziningi izesheli ezibheke ukuthi uMahlambi ahlukane neSundowns zigxume